Sakafo tsy misy lafarinina: ny tombony, ny vokany ary bebe kokoa | Nutri Diet
Te a sakafo tsy misy lafarinina? Mihamaro ny olona misafidy ny ho vanim-potoana iray nefa tsy mila lafarinina amin'ny sakafo, ity asa ity dia mety ho fitsapana raha tsy tanterahina amin'ny fomba sahaza izany satria ny lafarinina dia hita ao amin'ny ankamaroan'ny sakafo foto-tsakafo manana finiavana be dia be isika hanatanterahana sakafo tsy misy lafarinina.
Sarotra be ny manova ny fomba amam-panaonay sy ny mofonay, ny vokatra tsara indrindra avy amin'ny lafarinina, izay sarotra indrindra mandrarana.
Samy mofo, mofomamy, mofomamy spaonjy, pie nofonosina, pizza ... ireo rehetra ireo misy vokatra matsiro misy lafarinina. Vokatra iray izay amin'ny fotoana maharitra dia tsy mahasoa loatra na mahasalama loatra ho an'ny vatantsika, mainka izany raha iharan'ny fanararaotana izy. Noho izany, eto ambany isika dia hijery ny fomba famolavolana sakafo tsy misy lafarinina sy ny tombotsoan'ny sakafo tsy misy mofo.
1 Soa azo avy amin'ny sakafo tsy misy lafarinina
2 Fanoloana ny sakafo tsara
2.1 Mofo, cookies ary sakafo maraina
2.2 Mamy sy tsindrin-tsakafo
3 Andro fisakafoanana tsy misy lafarinina na siramamy
4 Vokatry ny sakafo tsy misy lafarinina
Soa azo avy amin'ny sakafo tsy misy lafarinina
Ny olona misafidy sakafo tsy misy lafarinina dia mety manana antony maro: ny lafarinina dia mahatonga azy ireo hahazo lanja, tsy mahazaka gluten izy ireo na satria misafidy ny hanary ny varimbazaha mandritra ny fotoana iray.
Esory ny lafarinina Amin'ny sakafo dia mety ho asa sarotra tokoa ary saika tsy ho tanterahina satria vokatra maro no ao anatiny, na izany aza, mihamaro ny olona ampirisihina andramo mandritra ny fotoana fohy ny tenanao raha afaka mahatratra azy izy ireo ary mahatsikaritra ny tombony azo avy amin'izany.
Manome toky ireo manam-pahaizana fa lafarinina fotsy no voahodina indrindra izay hitantsika dia azontsika soloina lafarinina na lafarinin'ny legume izay manome fibre sy otrikaina mahasalama kokoa. Na izany aza, ho hitantsika hatrany ireo olona izay te-hiala aminy tanteraka. Mba hanaovana izany, etsy ambany, dia hamela anao lakile vitsivitsy ianao hahafahana manatanteraka sakafo tsy misy lafarinina ary tsy maty manandrana.
Miaraka amin'ity karazan-tsakafo ity afaka very kilao maro ianao Amin'ny herinandro voalohany hatramin'ny nahatongavan'ny vatana, tsy nahazo gliosida firy toy ny taloha, dia hitodika any amin'ny tahiry siramamy sy tavy ho an'ny angovo.
Ny fitazonana ny sakafon'ity fomba ity dia tsy mitovy amin'ny hoe nalemy, mety ho izany mitazona sakafo mahavelom-bolo tsy misy lafarinina sy siramamy raha very lanja ara-pahasalamana.
Ireo dia ny tombony fa hanomboka hahatsapa ianao rehefa misakafo tsy misy lafarinina:
Raha manana kely ianao matavy hihena ianao amin'ny fomba mahasalama nefa tsy mila mihinana kely.
Ho afa-po ianao ary ny faniriana hihinana tsakitsaky anelanelan'ny sakafo dia hanjavona.
Ny haavon'ny hihena ny triglycerides Tena satria ny atiny no miandraikitra ny famokarana tavy avy amin'ny glucose ao anaty gliosida voatelina, raha tsy lany ny gliosida dia tsy hamokatra tavy tsy ilaina ianao.
El hitsangana ny kolesterola tsara ary hahatsapa ho mavitrika kokoa ianao.
Tsy mila manahy ianao haavon'ny insuline satria hijanona ho marin-toerana izy ireo.
La milanja avo lenta.
Fanoloana ny sakafo tsara
Mba tsy ho resin'ny fakam-panahy hihinana lafarinina mandritra ny fanaovanay an'ity karazana sakafo ity dia holazainay aminao ny sasany fitaka mba hahafahanao manolo vokatra tena marihina ho an'ny salama hafa izay tsy misy siramamy na lafarinina voatsabo.
Mofo, cookies ary sakafo maraina
Azo atakalo ny mofo ho an'ny sotro oatmeal na varimbazaha telo sotro fihinanana. Ho an'ny sakafo maraina dia azonao atao ny misafidy ny handany serealy amin'ny legioma voatsabo, ny vary mifono, ny lentil na ny soja. Mandritra ny sakafo, ireo sakafo ireo ho voatendryAmin'ny ora fisakafoanana maraina ihany io.
Mamy sy tsindrin-tsakafo
Rehefa mahatsikaritra vongan-siramamy mitete ianao dia afaka misafidy zava-mamy voajanahary toy ny stevia, syrup sy agave. Aleo ny voankazo marobe no ampidirina mandritra ny fotoana anaovana ny regimen mba hahazoana ny fructose amin'izy ireo.
Andro fisakafoanana tsy misy lafarinina na siramamy
Etsy ambany misy anao a ohatra ny sakafo tsy misy lafarinina na siramamy azonao ampiasaina isan'andro isan'andro:
sakafo maraina: Fampidirana na kafe misy ronono an-tsokosoko, lovia serealy soja varimbazaha iray lovia. Ampahany amin'ny fromazy vaovao madio.
sakafo atoandro: voankazo iray
Sakafo: Kapoaky ny volontsôkôla miaraka amin'ny legioma steamed, nitafy iray sotro ny menaka oliva virijina, salady voankazo misy fromazy fanosotra maivana.
Snack: Yaorta skimmed miaraka amina chia sy kennel vitsivitsy.
sakafo hariva: Trondro voatono miaraka amin'ny salady legioma mitafy menaka kely sy voasarimakirana. Jelly maivana.
Ity dia ohatra iray amin'ny sakafo tsy misy lafarinina sy siramamy. Amin'ny fampifangaroana ny sakafo mahasalama dia mety ho feno tanjaka sy voavoatra isan'andro isan'andro ianao dia ho tsikaritrao fa tsy tsy ampy sakafo ianao ary manomboka ho very kilao soa aman-tsara.
Ny tombony azo avy amin'ny lafarinina tsipelina
Hihena haingana ianao Tamin'ny voalohany satria very tsiranoka be ianao, saingy amin'ny fampidirana tavy kely dia kely ary ireo izay lanina dia manana kalitao avo lenta, toy ny voanjo na zavokà na voanio voajanahary, dia hanomboka hamoy ny volanao amin'ny faritra, tongotra sy valahana kokoa ianao.
Toy ny isaky ny sakafo Soso-kevitra ny hiaraka fihenan-danja miaraka amin'ny fanatanjahan-tena aerobika isan-kerinandro Amin'izay ianao dia hanampy amin'ny fitazonana ny vatana tsy hanana fahalemena.
Vokatry ny sakafo tsy misy lafarinina
Araka ny efa nolazainay, ny fihinanana sakafo voadio maro dia mety hiteraka aretina izay tsy ampoizintsika hijaly, toy ny karazana homamiadana. Ny lafarinina no antony mahatonga ny fiakaran'ny tosidrà, ny phlegm, ny diabeta ary ny moka.
Izao no hitranga raha tsy mihinana lafarinina mandritra ny fotoana iray ianao:
Ho very ny filana: ny lafarinina dia misy akora antsoina hoe gliadin izay tompon'andraikitra amin'ny fandefasana signal any amin'ny ati-doha hilaza aminao fa manana filan-dratsy ianao. Ka raha handroaka an'io ianao dia tsy hitranga izany.
Hifehy ny lanjanao ianao: ny lafarinina voadio dia misy siramamy betsaka, izany dia mitombo ny glucose amin'ny ra ary miseho avy hatrany ny lanjany be loatra. Raha mijanona tsy mihinana vokatra miaraka amin'ny lafarinina ianao dia tsy hiseho io olana io ary raha ampifangaroinao amin'ny a sakafo hanary kibo, ny vokatra dia mety hahagaga.
Hanafaingana ny metabolisma ianao: Fikarohana marobe no nanamafy fa raha laniana lafarinina voadio dia miadana kokoa ny metabolisma raha oharina amin'ny lafarinina vita amin'ny varimbazaha manontolo.
Avy amin'izay azontsika jerena tsy misy vokany ratsy noho ny tsy fihinanana lafarinina voadio na fotsy, ary koa manao tsy misy siramamy. Izy ireo dia vokatra roa izay hita amin'ny sakafo be dia be, koa na dia te-hanary azy ireo tanteraka aza isika, dia ho lasa asa sarotra, na dia tsy azo atao aza.
Ny fihinanana sakafo tsy misy mofo dia toa somary henjana Na hafahafa amin'ny voalohany, satria sakafo izay nanjary famenon-tsakafo sy sakafo hariva rehetra, fa ny fanaovana tsy misy izany dia mitondra tombony be ho antsika raha mitady hihinana salama kokoa isika ary hanafaingana ny fihenan-danja.
Lazao anay ny fomba niasan'izany ho anao sakafo tsy misy lafarinina Ary avelao aminay ny torohevitrao mba tsy ho lasa mafy noho ny an'ny olona sasany ny sakafo tsy misy mofo. Efa nanandrana ny Sakafo 500 kaloria ho famenon-kanina hohanina tsy misy mofo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo tsy misy lafarinina
Nataoko nandritra ny 6 volana ... sakafo tena tsara ary tratra ny vokatra irina ... .. Very 15 kilao eo ho eo ... ary ny zavatra tsara indrindra dia ny mahatsapa fa tsara izany satria indray andro vitsivitsy. mandalo (3-4) tsy ilaina intsony ny mihinana lafarinina sy ny derivatives ... azo atao ...
Mijaly amin'ny aretim-bavony mifandraika amin'ny tsy fandeferana amin'ny lafarinina aho, ny fanasitranana: atsaharo ny fihinanana izay rehetra misy lafarinina, tao anatin'ny volana vitsivitsy dia tsara ny vokatra, tsy noho ny fijanonan'ny fanaintainan'ny tsinay tsy mahazo aina ... fa noho ny fahaverezako habe 3 ihany koa .
Ny fizotrany, hoy aho, dia sarotra. Satria ny sakafontsika dia mifototra amin'ny lafarinina, izay tsy ahafahanao mihinana sakafo intsony ao anatin'ny fotoana fohy, satria ireo macaroni mora ampiasaina, na ilay sandwich ho an'ny sakafo atoandro dia tsy nifanaraka tamin'ity fomba fiaina vaovao ity, tsy maintsy nanomboka nandrahoina ianao, mividy fisainana.
Tsy nanandrana sombin-mofo nandritra ny herintaona sy tapany aho, na zava-mamy ankoatry ny voankazo. Ary vao mainka holazaiko fa nihatsara ny toetrako.
Mazava ho azy fa nampahafantatra ny tenako momba ny vokany mety hitranga aho, satria tanjona io loharano fibre sy mineraly io dia tena tsara ho an'ny vatantsika, fa raha manatona ny dokotera isika dia misy sakafo maro izay manao io asa io ihany,
Ny fangorahana dia tsy afaka mankafy sandwich tsara na pizza mahafinaritra sasany, fa manome toky aho ary manome toky fa hahatratra izany isika, ankoatry ny vatana tsara, kalitaon'ny fiainana.
Handalo zavatra maty aho, mbola tsy voamarina ny aretina fa nandritra ny iray volana dia nihinana tsy misy gluten, tsy misy ronono ary sakafo ho an'ny celiac, na dia mbola tsy haiko aza hoe izaho na tsia. Efa mahatsapa ho salama tsara aho ary tsy dia marary be loatra amin'ny kibo. Sarotra be izany ary hitako fa sarotra ny mieritreritra izay hohanina isan'andro ary isan-karazany izany. Ho fanampin'izany, lafo kokoa ny sakafo celiac.
Valiny tamin'i Nadia
Salama, nanao loto be aho ary tsy afaka mampihena ny lanjako, manana olana ara-pahasalamana aho, manao kortikosteroid aho, hisy ifandraisany betsaka amin'izany ve? Azafady azafady ny hevitrao ary raha misy sakafo azoko atao amin'ny fiheverana ilay mesication satria tsy azoko avela mandritra ny fotoana fohy. Misaotra anao!
manadaladala dia hoy izy:
Voalohany indrindra, tiako ny hanazava fa tsy dokotera aho na inona na inona noho ny etil, fa nanana namana roa izay efa nitovy tamin'ny anao koa aho. Notsaboina amin'ny kortikosteroid izy ireo ary sarotra ho azy ireo ny mitazona ny lanjany.
Ny iray tamin'izy ireo dia mpahay sakafo ara-tsakafo nefa ny marina tsy dia hendry loatra tamin'ny sakafony ary be loatra ny lanjany. Mihinana lafarinina isan-karazany: ovy, yucca, akondro, soda, chips ovy, mofomamy, mofo, pizza, paty raha fintinina !!! Amin'ny zavatra rehetra !!!
Ny iray hafa dia tsy nankany amin'ny mpahay sakafo iray, nanapa-kevitra fotsiny izy ny hihinana sakafo ara-pahasalamana araky ny fampahalalana izay ananan'ny ankamaroantsika olombelona (ary nomen'ilay mpanao sakafo ho an'ny namako iray hafa): fanjifana be ny legioma sy legioma, lafarinina iray iray andro (tsy voadio), nandeha antsasak'adiny isan'andro ary nanandrana nanao fanazaran-tena. Tsara toetra be izy ary nitazona ny lanjany, tsara tarehy izy ary faly amin'ny endriny na dia eo aza ny fanaovana kortikosteroid.
Azoko tsara fa misy sakafo sasany tsy azo laniana, tsy maintsy mitandrina ianao amin'ity karazan-tsakafo ity, satria miteraka fihetsika sasany amin'ny fanafody!
Samy nisy fameperana tsiranoka, ka ny voalohany nisotro soda ary ny rano faharoa, ranom-boankazo namboarina tamina tantely, iza amin'ireo zava-mamy no tsy voahodina faran'izay kely voajanahary ary voajanahary indrindra, nisotro dite maitso koa izy, tamin'ny isa kely dia kely! Ny faharoa kosa naka rano mafana ampahefatry ny posillo tamin'ilay vavony foana !!!!
Ny namako faharoa dia nanova tanteraka ny fahazarany mihinana, farany tsy navelany ho toy ny sakafo hafa fotsiny io, fa ny fomba fihinany ihany. Ho takalon'ny lafarinina dia mihinana voanjo, voankazo maina, fromazy, raha fintinina! Na izany aza, rehefa manana faniriana izy dia mihinana izay tadiaviny, saingy tsy isan'andro dia manana tanjona ny hihinana zavatra tiany ny alahady iray isaky ny 15 andro ka tsy manary tena tanteraka, fa mijanona ho hentitra amin'ireo 28 hafa. andro amin'ny volana !!!
Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fahafahanao mihinana ny sakafo rehetra tsy misy fetra !!!
Ny zava-dehibe iray dia ny tsy maintsy fifehezana sy tsy fiovàna…. Tsy misy sakafo majika izay sariaka amin'ny vatana, resaka fotoana, fihetsika ary fanovana fahazarana mihinana izany!
Valiny tamin'i Sanligar
Ny sakafo tsy misy lafarinina dia mandeha. 15 andro no nanaovako an'io ary very efa ho 4 kilao aho, milatsaka ny patalohako satria ilaozany malalaka aho rehefa nahazatra ahy matetika. Noheveriko fa rehefa avy niteraka ny zanako (1 taona lasa) dia ho matavy loatra aho fa misaotra an'Andriamanitra fa mandeha tsara io sakafo io. Tsy mihinana gilasy, zava-mamy, na zavatra matavy loatra aho, mofo varimbazaha fotsiny, tsy misy paty, tsy misy vary, na legioma lafarina (toy ny ovy, ovy, mangahazo, sns). Na ny gastritis aza dia nijanona tsy nanahirana ahy hatramin'ny nanombohako ary nihombo ny metabolisma. Manoro hevitra azy 100% aho. Mazava ho azy, tsy maintsy manaraka tsara an'io ianao ary aza avela hisy hanome mofo na zavatra voarara anao ary hanaiky azy fa tsy ratsy tarehy.
chubby dia hoy izy:
Salama! tsara ny sakafo ... ny fanontaniako dia hoe afaka manova ny filaharan'ny sakafo ve ianao nefa tsy very fihinanana?
Valiny tamin'i Gordi
anontanio akoho amam-borona sns ... firy grama izy ireo?
Hanomboka azy aho…. afaka 15 andro dia holazaiko aminao ny ataoko …… ..
mimenomenona dia hoy izy:
Salama, ny vadiko dia tsy nanao siramamy na lafarinina io, fa ny ambin'izay sakafo nohaniny tsara ary, ankoatr'izay, nisotro ny divay izy tamin'ny sakafo antoandro, izay noheveriko fa tsy hahomby, fa ao amin'ny herinandro voalohany latsaky ny 4 na 5 kg ary ny faharoa 3. amin'ny total 8 kg ao anatin'ny tapa-bolana, dia mampatahotra ahy ny mamela ny lafarinina sy ny zava-mamy nefa mamporisika ahy izany faingana ny fahaverezako lanja ka manomboka amin'ny herinandro ambony aho, saingy manana ho hentitra be tsy misy lafarinina na siramamy na pinch
Mamaly an'i gimena
Tsy mihinana fromazy aho !!! amin'ny endriny rehetra ... satria tsy tiako ... fofonaina hafa inona no azoko soloina azy? satria ny sakafo rehetra novakiako hatreto dia misy fromazy daholo !!!
Azonao atao ve ny miaraka amin'ny hena amin'ny voanio na vary? ary ny bar cereal ve azo lany?
Nataoko. Natolotry ny mpanazatra ahy tamiko tao amin'ny gym. Very 10 kilao aho tao anatin'ny iray volana. Manoro hevitra anao aho ny hanisy fanampin-tsakafo toy ny jamam maivana, fromazy skim, serealy TSY MISY siramamy sy vary volontany.
Manantena aho fa hanampy an'izay efa hanomboka izany! 🙂
mariaagostina dia hoy izy:
tsy misy lafarinina? na vary?
Mamaly an'i mariaagostina
Salama! Izaho dia eo amin'ny andro voalohako amin'ity sakafo ity .. ary ny angovo haiko amin'ny laoniny dia mahatalanjona .. Tsy vitan'ny hoe mampihena ny lanja .. Manova ny toe-po izany. Ny lafarinina dia nanome ahy soritr'aretina mitovy amin'ny fahaketrahana. Ary tsapako fa tsy kivy aho .. nihinana ratsy aho! Betsaka ny sakafo! Manadihady! Manaova mofo misy masombin-tany any ... fibre. Ny lafarinina dia azo soloina masomboly .. Ny siramamy dia vidiko .. nasiako siramamy muscabo na siramamy stevia ao anaty kafeiko .. Fa aleoko muscabo .. Woks legioma .. Ampio tratra akoho na mbola tsara kokoa… Trondro vaovao .. Ary maro rano! Ny azon'izy ireo atao .. Arakaraka ny fanilihana azy ireo no hampihena ny fitaintainanana .. Nihinana pilina nomen'ny mpitsabo aretin-tsaina ahy aho noho ny tebiteby ary efa nijanona aho. Makà fizahana ankapobeny alohan'ny hanombohana ny sakafo ary afaka 3 volana eo .. tsy tokony ho sakafo fotsiny io .. Tokony ho fanovana fahazarana mandrakizay izany! Miarahaba anao ary mirary fahasalamana!
Valiny tamin'i Eliana
Zavatra hafa! Izay rehetra tsy hitanao dia azo soloina! Omaly aho nanao pizza oatmeal. Oatmeal .. Rano .. diloilo oliva kely .. sira sira .. masirasira kely .. Q hanome tsiro bebe kokoa ho an'ny pizza sy nendasina .. Ny saosy dia namboarina tamina voatabia voajanahary .. nandrahoina ary namboarina .. A tongolo voatetika .. Menaka oliva sy fromazy tianao indrindra .. Matsiro !!!
Manampy ahy ianao? Te ho very 8 k (menopause) aho nanandrana zavatra maro isaky ny nitombo bebe kokoa
Te hanandrana an'ity sakafo ity aho raha tsy lafarinina na siramamy
Tsy tiako ny ronono afa-tsy fromazy
Legioma, ny voankazo rehetra tiako koa ny lasopy fa tsy fampidirana izay tsy azon'ny voankazo na esorina? Ireo legioma sy hena ireo ihany, tiako ny labiera, ny ambiny…. Mety ho vera iray champagne indray mandeha isaky ny 15 andro
Manao yoga 2 heny S fiaramanidina gym 2 x S aho ary 1 x herinandro eo an-toerana miaraka amin'ny hafanana (ora inona) no anampianao ahy hahafaly ahy.
Mary Masoandro dia hoy izy:
Hanomboka ity sakafo ity aho, ary tiako ho fantatra raha mihinana zavatra mitovy isan'andro, na herinandro, na volana ianao? Sa misy karazany? Fantatro fa lafo amiko izany satria andevozin'ny mofo sy zavatra mamy aho, fa raha tsy manao zavatra aho dia hijaly ny fahasalamako.
Valiny tamin'i Maria Sol
Faly be aho mamaky ny hevitry ny olona nanandrana azy io ary very lanja be. Hanomboka azy aho anio, afaka 15 andro dia holazaiko anao ny toetrako !! 🙂
Salama! Te hahafantatra aho raha afaka mihinana vary. ?
Hanomboka azy aho anio aorian'ny fanamarihako fa liana aho!
Valiny tamin'i Norma
Salama. Manontany aho, mitovy ve ny sakafo isan'andro?
Salama tsara tolak'andro
Tsara ny sakafo satria tsy mametra anao mihinana raha tsy mamoaka izay ratsy ho anao.
Manomboka anio aho dia manantena valiny!
Maria Laura dia hoy izy:
Salama, tokony ho 20 andro lasa izay dia nanomboka tamin'ny sakafo mifototra amin'ny fanampian'ny mpahay sakafo iray aho, ny tena marina dia nidina tany amin'ny 4K aho izao, nandao ny sira sy ny lafarinina aho, fa efa mandeha tsara aho izao fa tiako ho anao maneho hevitra momba ny fihetsik'ireo izay efa nanomboka, omaly ny sira ny lafarinina, avy eo izy naneho hevitra momba ny zavatra tsapako ary raha mihena aho, ireo hevitra ireo dia manampy ahy tsy hamaha
Valiny tamin'i Maria Laura
uru dia hoy izy:
Salama, avy any amin'ny bs ace aho, la plata. Nanomboka koma aho ary nihena ary ny herinandro voalohany dia very 1.300 XNUMXkg aho. Auriculotherapy tmb mihatra aminao amin'ny sakafo. Ny herinandro voalohany dia tsy nihinana lafarinina aho, saingy tsy nilefitra ary nanomboka nahatsapa ho ratsy, ka nanohy nikarakara ny tenako toy ny fitondrana vohoka, voan'ny diabeta bevohoka. Ny tsiambaratelo dia ny fihinanana foana ireo zavatra telo, proteinina, alimodon ary legioma. Misy sakafo enina isaky ny adiny roa na mihoatra. Hajaina ny fandaharam-potoana. Rano maro. Sakafo maraina, sakafo maraina, sakafo atoandro, sakafo hariva, sakafo hariva, sakafo hariva. Akana ny akondro raha lehibe izy ary intelo fotsiny isaky ny. Herinandro Mpanamamy sy menaka tsy misy afa-tsy sotro roa amin'ny salady.
Mamaly an'i Uru
euge dia hoy izy:
Salama, ny marina dia niasa ho ahy tao anatin'ny telo volana tamim-paharetana sy fifehezana, nahavita namoy ny 15 kg tao anatin'ny telo volana aho, tsia, eny, tamin'ny alàlan'ilay taratasy ary mazava ho azy fa ny fanaovana spaoro no ampahany hafa amin'ny famenony.
Valiny tamin'i Euge
Giselle dia hoy izy:
Salama, hataoko io ary afaka 15 andro dia holazaiko aminao
Mamaly an'i Gisella
Sarah Sa dia hoy izy:
Ny sakafo ratsy indrindra eto an-tany, ohatra ratsy !!!
Valiny tamin'i Sara Sa
vehivavy bisikileta dia hoy izy:
Salama, azoko an-tsaina fa raha tsy mihinana lafarinina iray deflates sy detoxify, ny ratsy indrindra dia ny lafarinina fotsy. Hizaha toetra azy aho. Manomboka anio aho, milaza aminao momba ireo andro ireo aho. Miarahaba anao ary mirary maraina soa ho an'ny rehetra!
Valiny amin'ny vehivavy bisikileta
Salama! Tiako ho fantatra raha misy fetrany ny fihinanana zavatra hafa izay tsy gliosida, toy ny voankazo, fahatapahana mangatsiaka, ronono an-tsokosoko? Io dia mety ho? Misaotra!
Laura Manomboka sakafo sahala amin'izany aho, tsy misy lafarinina ary tsy misy siramamy, tao anatin'ny 4 andro dia very 2 kilao aho, nefa mivonto izany. Mila misotro ianao raha mahavita rano 3 litatra isan'andro, avelao ny zava-pisotro malefaka na rano misy tsiro. Aza manontany fanapahana mangatsiaka fa ataovy ham / bondiola dia mihazakazaka toy ny hena izy ireo (fantatro fa rehefa nankany amin'ny nutri aho). Ny tena tokony hoeritreretinao dia ny fandaharam-potoana, satria ny sakafo maraina sy ny sakafom-pisakafoanana dia omen'izy ireo kafe misy ronono skim (ronono 100ml tsy misy intsony) sy voankazo na yaorta misy voankazo na malamalama izay azonao ampiana ronono izay kafe, atoandro ary sakafo hariva hena mena (indray mandeha isan-kerinandro) akoho, henan-kisoa ary trondro miaraka amin'ny legioma afa-tsy ovy, ovy ary katsaka. Fa ny iray amin'izy roa dia tsy maintsy miaraka amin'ny hena, ny iray kosa maintso fotsiny satria tianao ny mihinana azy (masaka na manta) raha ny voankazo azonao rehetra dia tsy ny avocado (tsy haiko ny antony) ary ohatra manana ianao fanahiana mihinana paoma ianao na izay anananao, aza rarana satria ratsy kokoa noho ny siramamy (avelanao ny sakafo), aza manadino na stevia fotsiny. ary ny tena zava-dehibe dia ny fandehanana an-tongotra 1hs farafahakeliny 6 andro isan-kerinandro. Zava-misy iray hafa koa raha raisina legioma 1k dia mitovy kaloria 200, mitovy amin'ny ampahan'ny hena (felatanana) ka ny legioma dia mety ho izay tiana (mazava ho refy) no ahh ary alohan'ny sakafo atoandro sy sakafo hariva na vera roa rano na lasopy mety ho haingana! Manantena aho fa afaka nanampy anao !! Oroka lehibe!
Ludmi dia hoy izy:
Salama, mety misy olona manampy ahy hanao sakafo maraina sy tsakitsaky ???
Valiny tamin'i Ludmi
Ahoana ny fampinonoanao? Maharary ve? hahafantarana raha azo atao
Valio i Macarena
Ny sakafo dia tena tsara, ny sakafo azo arahana, tsy misy ireo fomba fahandro izay manana ny zavatra rehetra! Hiezaka ny hanao izany aho, na dia ny olana lehibe aza dia ny fitaintainanana, androany dia vitako ny niady tamin'ny bara sôkôla belladieta, izay nahatonga azy ho tonga tsara amin'ny sakafo, ratsy kokoa ny fahitantsika ny fomba fanaoko, raha tsy izany dia handray manaikitra ny bariko ary manohy ny ambiny, hidina kely aho fa azo antoka fa hahita valiny Misaotra anao aho
Tsara ny zavatra rehetra nolazain'izy ireo, androany no nanombohako tamin'ny fanafoanana ny lafarinina. Fantatro fa ho lafo amiko izany fa tena te-hihena aho. Nomena ahy ny mpihinana sakafo mahavelona ahy, saingy ampidiriko 2 azony isam-bolana.
Handeha amin'ny andro fahefatra aho, milanja roa kilao dia tsara, esory ny lafarinina ary mivoaha azo antoka
Afaka mihinana ny voa ve ianao? Mba omeo ohatra ny menio. tsy misy ovy. na katsaka. afaka mihinana voanjo ve ianao?
Salama, handeha amin'ny andro faha-6 tsy misy lafarinina aho ary very kilao 2, tena tsara ny sakafo tsy misy lafarinina ... be ny rano sy ny tsakitsaky alohan'ny sakafo atoandro, tsakitsaky, voankazo iray, jelly laigt ..
Sakafo tena tsara, 15 andro no nanaovako azy ary efa very 3 kg aho!
Mora be ny manaraka! Manoro izany aho
Raha mampinono aho, inona no azoko atao ary inona no tsy
Marie Izany dia hoy izy:
Salama! Torohevitra AZA hanao sakafo fetra mandritra ny fampinonoana, satria ny poizina avoaka dia azo alefa ao anaty ronono (indrindra fa amin'ny sakafo toy ireny izay amokarana vatan'ny ketône) Mihinana legioma sy voankazo betsaka, indrindra ny manta ary araraoty izany fotoana hidinana voajanahary. Nahafinaritra ahy izany
Valiny tamin'i Marie Ese
Kyci dia hoy izy:
Salama daholo, ny sarotra dia ny manomboka fa azo atao izany, nandeha tamin'ny habe 12 aho niaraka tamin'ny 1.72cm ka hatramin'ny habe 6 ary 55kg nandritra ny 5 taona tonga lafatra, nefa bevohoka aho ary tsy niverina ny heriko ary nandany taona maro aho hanombohana indray, Fa noho Andriamanitra sy ny Virjiny no nanombohako indray, 9 volana aho nefa tsy nihinana siramamy ary 8 andro tsy nisy lafarinina, ny andro voalohany nahazo migraine ary taorian'io andro io dia nisy hery bebe kokoa nampidina ny savaivon'ny tongotro ary kibo dia efa afaka niverina tamin'ny Akanjo misy habe kely kokoa aho, izany hoe sarotra be ny mampiato ny siramamy sy ny lafarinina miaraka, rehefa voafehiko ny siramamy dia najanoko ny lafarinina, ary FALY aho, antenaiko fa tohizo ity fomba fiaina ity.
Valiny amin'i Kyci
Salama, roa herinandro lasa izay, nanomboka tsy nihinana lafarinina na siramamy aho, fa roa kilao fotsiny no very tao anatin'ny tapa-bolana .Fa kely ve izany? Misy olona afaka manampy ahy ve?
Miankina betsaka amin'ny lanja voalohany ny fidinana, mazàna ireo manana kilao bebe kokoa no hahavery bebe kokoa. Miarahaba.
Herinandro lasa izay dia nanomboka aho ary very 2700 kg faly ary nanana tanjaka be
Androany aho nanomboka, ny rahavaviko efa very 3 kilao tao anatin'ny herinandro manantena aho fa very 8kg amin'ny ankapobeny. Maniry fomba fahandro marobe ho an'ny fanovana aho manana taratasy iray izay ilazan'izy ireo amiko izay hohaniko dia tsy haiko ny mampiditra azy fa amin'ny ny tenany tsy misy lafarinina na zava-mamy koa tsy misy voankazo farafaharatsiny volana voalohany nilazan'izy ireo tamiko fa tokony hoferako tanteraka ny siramamy na dia ny voankazo aza dia ny voasarimakirana sy legioma voatavo ihany no azo hanina miaraka amin'ny dibera sy mayonnaise fa tsy voatabia na saosy voatabia afa-tsy izy ireo endasina amin'ny menaka oliva, tsy afaka manao lasady akory izy ireo, tsy misy karaoty, tsy misy pitipoà, tsy misy voamadinika, tsy misy paty, ronono tsy misy skot na ronono fotsiny ary fromazy tsy misy tavy, noheveriko foana fa ny legioma natsatsika nanandrana ratsy tarehy nefa androany Nanomana azy ireo aho tamin'ny alàlan'ny fikosehana broccoli tongolo paprika tongolo lehibe misy hena kisoa sy seleria misy dibera tena matsiro nefa tsy haiko intsony izay ho fanomanana ...
White fandi dia hoy izy:
Nanomboka herinandro lasa izay aho, mahatsapa ho tsara kokoa noho ny tsy mavesatra loatra ary talohan'ny nandehanako dia toa nilentika aho izao, mandeha sy miaina ara-dalàna aho izao, nilaza tamiko ny dokoterako fa tsy misy mizana, nojereko ireo akanjo notanan'ity VAT ity ataovy ny antony manosika ahy. avelao ny siramamy sy lafarinina hatramin'ny andro voalohany, toy ny mofom-bary.
Valiny tamin'i Blanca Fandi
aorian'ny? Raha manao azy mandritra ny 1 volana aho dia mihinana lafarinina indray. apetrako indray mandeha ve ny zava-drehetra?
Costy dia hoy izy:
Salama anio, dimy andro lasa izay fa navelako tanteraka ireo lafarinina. Saingy nilaza tamiko izy ireo fa izany no zavatra ratsy indrindra mety ho vitako satria hanomboka hanafika ny tebiteby izy ireo ary te hihinana ny zava-drehetra aho. Marina izany? Na izany na tsy izany, mahatsiaro ho tsara aho ary tsy te hihinana azy ireo izy. Ho very lanja aho amin'ny fanaovana an'ity miampy aq mankany amin'ny gym?
Valiny amin'i Costy
Nandritra ny 15 andro no nanaovako izany ary nangetaheta be aho ary tsy nihena
Salama, tiako ny milaza aminao ny zavatra niainako. Herintaona mahery lasa izay, nisy namana nilaza tamiko fa nanomboka sakafo fanesorana lafarinina sy siramamy, ambany gliosidrat ary proteinina be. Eo ambanin'ny 40 kilao, folo ity iray ity. Ka nanova ny fomba fiainako koa aho, nesoriko tanteraka ny lafarinina sy ny siramamy tamin'ny fiainako, mafy dia mafy izany, nandeha namonjy lanonana na fitsingerenan'ny andro nahaterahana aho ary nampandroin'izy ireo ahy toy ny hoe celiac aho, rehefa afaka 3 volana dia nijanona tsy nijaly tamin'ny soritr'aretin'ny tsy fifadian-kanina aho avy amin'ny mila gliosida, indrindra ny lafarinina. Androany dia 1 taona sy 1 volana aho (tsy miteny aho hoe sakafo satria fiovan'ny fahazarana ihany izany amiko) very 50 kilao. Vehivavy aho, 34 taona aho, nilanja 128, androany milanja 82 aho, mbola tsy ampy, te-hahatratra 68, fa ny fototra, tiako ho fantatrao fa mampiofana soccer 2 in-droa isan-kerinandro aho, milalao hafa 2 fanampiny, ary izao dia nanomboka gym isan'andro aho izay anaovako hery, cardio sns. Azo atao izany, tsy mora izany, fa ny mandeha mamaky fitaratra ary mahita io vatana tadiavinao io dia tsy voavidim-bola. Miarahaba.
Florence, misy fomba hahazoana ny drafitra ataonao? Nanomboka tamin'ity herinandro ity aho tamin'ny zavatra nitovizany, lafarinina zero sy siramamy, proteinina, voankazo ary legioma, ronono kely. Tao anatin'ny efatra andro dia very kilao roa aho, nalaiko avy tao amin'ny pejy Facebook antsoina hoe Córdoba Nutrition Community ny maodely ary tiako ho fantatra raha zavatra mitovy amin'ny nataonao na raha afaka mahazo hevitra vaovao aho.
Miarahaba sy miarahaba ny zava-bita lehibe!
Salama, tiako ny sakafo.Izaho manomboka anio, betsaka ny fanehoan-kevitra tsara izay mamporisika ahy hanao izany.
Valiny tamin'i Analia
Salama, nanomboka ny sakafo tsy misy lafarinina sy siramamy aho herinandro lasa izay ary very 4kilos aho dia tena entanin'ny fahasalamana aho no tsara indrindra
hanova simunovich dia hoy izy:
Tsy nihinana lafarinina na siramamy nandritra ny 15 andro aho, fa ny croissant indray mandeha isan-kerinandro. Mahatsiaro ho tsara tarehy aho. Very 2 kilao. milanja 68 kg izy ary 66 kg. Tsy sorona izany fa manolotra azy. Mividy faktiora sy cookies isan'andro aho ho an'ny zanako sy ny zafikeliko ary tsy te hanandrana aho.
Valiny hanovana simunovich
Maria Lucrecia dia hoy izy:
Salama zazavavy! Telo andro lasa izay dia nanomboka nisakafo tsy misy lafarinina aho, tsy fantatro raha mety izany, fa tsy toy ny lafarinina lafarinina soloako vovo-bary raha tsy voafehy, tsy mbola lanja aho, fa misimisy kokoa , ary amin'ny angovo bebe kokoa.
Mofomamy tsy misy totoina:
Mampiasa ny silaka Zucchini eo amin'ny farany ambanin'ny karatra ary manampy ny famenoana mba hanandrana. Raha ny ahy dia zavamaniry aho: tongolo volamena, fromazy ary atody nokapohina, sosona Zucchini hafa ary voaendy!
Valiny tamin'i María Lucrecia
Mampiasa silaka Zucchini eo ambanin'ny lapoaly aho ary manampy ny famenoana mba hanandrana. Raha ny ahy dia zavamaniry aho: tongolo volamena, fromazy ary atody nokapohina, sosona Zucchini hafa ary voaendy!
kika.s dia hoy izy:
Androany aho dia manomboka ny sakafom-piainana TSY MISY VOLO NA TOLOTELA TOA HATONGAVA 15 andro aho hilaza aminao hoe ahoana no fandehany.
Mamaly an'i kika.s
mariela arias rodriguez dia hoy izy:
Tsy nihinana lafarinina aho nandritra ny 5 andro ary rehefa afaka izany dia hitako fa manana tavy matavy matevina eo amin'ny andilako.
Valio i Luz mariela arias rodriguez
Salama, nijanona tsy nihinana lafarinina, siramamy sy yaorta karazana ronono ary ronono omby aho, ny soja sy ny fromazy no betsaka indrindra azoko ary tao anatin'ny tapa-bolana dia very enina kilao aho nefa tsy noana. Mihinana voankazo, legioma, akoho, raha misy izany. ary amin'ny fotoana maro ... mbola tsy nanandrana hena mena aho. Sarotra izany satria mahandro zavatra ho an'ny fianakaviako izay tsapako nefa mazoto ary te hihena aho. Makà dite maitso be dia be ho an'ny ny sakafo
Ny sakafo tsy misy lafarinina na afaka mihinana lafarinina tritika ianao. Raha izany dia ohatrinona no amporisihinao? MISAOTRA
Silvana Araceli Medina dia hoy izy:
Salama re, olona 1 volana aho no nihinana sakafo lafarinina zero, tsy tafiditra ao akory. Tsy misy vary na ovy. Omaly nankany amin'ny Doc aho ary very 13 kilao… !!! Tsy mbola nidina toy izao. Mandeha an-tongotra 40 minitra isan'andro amin'ny hafainganam-pandehako aho, tsy misy mamono tena, mandra-pahatongan'ny 20 taona farafaharatsiny ary tsy mijaly loatra ny taolako. Io ihany no sakafo niasa ho ahy, nandritra ny fiainako rehetra no nitolomako tamin'ny lanjako. Tsy mora izany fa resaka sary an-tsaina sy aingam-panahy fotsiny raha resaka mahandro no resahina. Aza mamaha, herim-po azonao atao. Darlings Araceli.
Valiny tamin'i Silvana Araceli Medina
Silvina Eliza Benegas dia hoy izy:
Satria ny fanovana ny fahazarana mihinana miaraka amin'ny vokany mahazatra amin'ny lolom-po ara-tsaina sy ara-batana ary ny astenia izay mahatonga izany, angamba tsy nivoatra tamin'ny metabolisma nandritra ny taona maro isika ka nihinana sakafo fotsy sy voadio izay amin'ny lafiny kolontsaina, ara-tsosialy ary tadiavintsika ara-toekarena Raha mihinana izany, ny fandevonan-kanina dia tsy nivoatra niaraka tamin'ny ambin'ny fivoarana hahatratra ny sakafontsika, ao anatin'ny tratrantsika sy ny fomba fiainantsika, ahoana ary inona no antony mahatonga ny olona sasany tsy mametaka ny sakafo tsotra indrindra noho ny ambiny. raha tsy maintsy misy ny rano indray mitete izay manampy amin'ny fametahana azy ny akora voajanahary nefa tsy mamela na inona na inona sakafo indsutrial sy refinera eh
Valiny tamin'i Silvina Eliza Benegas
Tena tsara 24 andro lasa izay, navelako ny lafarinina ary very 2,5 kg aho, tsy nisy na inona na inona intsony, taloha tamin'ny Pizzas, Empanadas, Bills, Biscuits, Alfajores - fa amin'ny finiavana dia afaka mamorona voankazo betsaka, voankazo maina, rano, legioma, voankazo ianao - fromazy - ny marina efa zatra ny zavatra rehetra vitanao - tsy maintsy mihena 10 kg fanampiny aho - arahabaona
Salama zazavavy, herinandro lasa izay dia navelako ny siramamy feno lafarinina. Mandritra ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva dia mitantana tsara aho fa ny inona ny sakafo maraina sy ny sakafom-bidy dia lafo be amiko satria manomboka maharikoriko ahy ilay toast, vary, fantatrao ve izay hosoloina azy? Very 1.5 kg niaraka tamin'ny kasety 40 minitra isan'andro aho
Salama!! Tsy matavy loatra aho, fa ny fanomezana lafarinina sy vatomamy no zavatra tsara indrindra nitranga tamiko. Tsy very lanja aho satria mankany amin'ny gym ary mihinana proteinina betsaka, ka ny tavy kely ananako dia novaiko hozatra.
Mahatsiaro maivana BE aho, matory 10 aho ary niova ho tsara ny toetrako.
Anne Vignone dia hoy izy:
Hatramin'ny 2 Janoary 2018 dia tao anaty drafitra tsy misy lafarinina na siramamy aho, tao anatin'ny telo volana dia very 18 sy sasany kilao aho ary mahatsiaro tena tsara. Tsy noana aho ary raha mahatsapa fa mila mihinana mofo, izay tsy tiako, dia soloiko amin'ny mofo vita amin'ny atody, ronono skim, ary vovo-mofo. Raha vantany vao nidina aho, raha mandeha amina hetsika iray izay misy zavatra tsy voalaza, dia mihinana kely aho ary tsy miakatra grama. Mazava ho azy ny ampitso dia averiko indray ny sakafo ara-pahasalamana….
Valiny tamin'i Ana Vignone
Salama, manao sakafo tsy misy lafarinina aho ary tsy afaka miala,
sakafo maraina. vady sy omelety misy atody roa sy chard
sakafo atoandro. matetika lasopy legioma na ron-kena ary salady c hena
sakafom-pisotro dite / kafe
sakafo hariva miaraka amin'ny sakafo nomanin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny sakafo tsy misy lafarinina
eo anelanelany rehefa noana aho toy ny sombin-kazo namboarina.
Nilaza tamiko izy ireo izao fa tokony hiezaka ny tsy hihinana na inona na inona eo anelanelan'ny sakafo aho. Voajanahary ve izany ??? Tsy maimaim-poana ve ny vola manelanelana ny sakafo? Tokony hijaly hanoanana ve aho ??? MISAOTRA ANAO
Telo andro lasa izay dia nanomboka sakafo tsy nisy lafarinina sy ny tena marina aho: lehibe tsy nandanja ny tenako aho fa ny refy tsara indrindra dia ny akanjo, lafo izany satria vita amin'ny lafarinina sy siramamy ny zava-drehetra, saingy amin'ny finiavana sy fahafoizan-tena no azo atao ny zavatra rehetra.
Dioscorides dia hoy izy:
Tonian-dahatsoratra:… »fanadihadiana maro no nanamafy fa raha lanjaina ny lafarinina voadio dia miadana kokoa ny metabolisma raha oharina amin'ny lafarinina tritika manontolo.
Izaho: "Raha tsy misakafo intsony ianao, na dia ny lafarinina varimbazaha manontolo aza, dia haverinao tsara ny fatran'ny metabolisma anao" ary apetrakao amin'ny haavon'ny natiora namboarina io.
Ny voka-bary serealy TSY MISY rehetra dia misy gliosida, izany hoe, rehefa metabolisma dia lasa siramamy.
Mandrosoa, ekeo ary soraty, aza akombony, rey olona. Iza no mandoa vola amin'ny tranonkala?
Valiny tamin'i Dioscorides
Galien dia hoy izy:
Tsy ilaina ny manaraka sakafo henjana fa hadalana manetriketrika izany. Atsaharo ny fihinanana ronono, serealy ary siramamy, ary koa ireo avy aminy. Soloina sakafo voajanahary tsy voahodina toy ny voankazo, legioma, masomboly, hena mahia, voanjo, trondro. Io no zavatra voajanahary, izay nohanin'ny lehilahy roa tapitrisa taona lasa izay, io no entinao ao amin'ny ADNanao, izay tsy ao anatin'ny ADN misy antsika dia ny ronono, siramamy ary serealy; ireo dia nampidirina tao amin'ny sakafon'olombelona tokony ho valo na folo arivo taona lasa izay, rehefa lasa nitazona ny olona. Noho izany antony izany, ny 65% ​​-n'ny mponina eran'izao tontolo izao (any Azia dia mahatratra 90%), no tsy mahazaka an'ireto vokatra ireto, indrindra ny vokatra vita amin'ny ronono, ary koa ny serealy (ny hany miavaka amin'ny serealy dia mety ho oats, fandalinana, fandalinana).
Valiny tamin'i Galen
john luke dia hoy izy:
Ity dia vao haingana, tamin'ny 26 Aogositra dia nanomboka ny sakafo tsy lafarinina na siramamy aho, nisotro dite maitso isaky ny sakafo, nihinana vary, paty mifototra amin'izany, hena, atody, fromazy, ham, legioma ary voankazo, manome fe-potoana 2 avela herinandro ary very 5kilos aho tao anatin'ny 3 na 4 herinandro, avy eo nanomboka nanao crossfit aho ary very 5kg hafa indray, noho ny halavako 1.68m nilanja 65kg aho, ary androany 6 Novambra dia teo amin'ny 53.8kg aho, ary mahia loatra loatra, tsikaritro ny fahatsapana fahafaham-po, tsy mitebiteby, manana sy very tavy avy amin'ny tongotro na feny sy kiboko aho. Tena afa-po aho satria ho avy ny fahavaratra ary ho tsara tarehy aho, nefa izao dia mikasa ny hanova kely ny sakafo hananganana hozatra bebe kokoa. Fiarahabana avy any Arzantina.
Valiny tamin'i Juan Lucas